Posted by ကို Tranquillus | စက်တင်ဘာ 18, 2018 | ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖှံ့ဖွိုးတိုးတ
သငျသညျအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်သို့မဟုတ်ဝန်ထမ်းများမှာပဲဖြစ်ဖြစ်, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘဝပွနျလညျသငျ့မွခြောရေရှည်တွင်သင့်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ နှစ်ပါးရှုထောင့်အပြန်အလှန်ဖြစ်ကြပြီးလယ်ပြင်၌သင်တို့၏ကျွမ်းကျင်မှုပေါ် မူတည်. အပြုသဘောသို့မဟုတ်အပျက်သဘောသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်။ တစ်ဦးမီးလောင်ထွက်လွှမ်းမိုးဖြစ်ခြင်းရှောင်ရှားသို့မဟုတ်ဖြစ်စေရန်, ဒီမှာနှစ်ခုပြန်လည်သင့်မြတ်ဖို့အချို့သောအထောက်အကူဖြစ်စေအကြံပေးချက်များဖြစ်ကြသည်။
NO ပြော Learn
သငျသညျမသွားနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ထက်တခြားအလုပ်တွေကိုလုပ်ဆောင်ရန်သင့်အားတောငျးလြှငျလာမည့်အားလပ်ရက်ကာလအတွင်းပုံမှန်အားဖြင့်, သင်တို့အဘို့ဖြစ်ကြ၏မျှမပြောပါငါသိ၏။ အမှန်စင်စစ်မလိုအပ်သောပြီးသားပိနေပါသည်ကြောင်းကိုသင်၏အလုပ်ကပိုအချိန် burdening ။ ဒါဟာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစွန့်ခွာမဆိုလိုပါ။ အရာအားလုံးသင့်ရဲ့နေ့စဉ်ပမာဏအပေါ်မူတည်ပေမယ့်သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ရဲ့တောငျးဆိုခကျြကိုပြောင်းရွှေ့ကြောင်းခံစားရလျှင်ငြင်းဆန် သာ. ကောင်း၏။
ကျနော်တို့အဆက်မပြတ်နားမထောင်အဖြစ်အဲဒါကိုပြန်ဆယ်တင်ဖို့ကိုယ်ခန္ဓာအဘို့အိပ်စက်ခြင်း၏ပျမ်းမျှ 8 နာရီကြာ, အမြဲဒီအသုံးအနှုန်းလေးစားကြိုးစားပါ။ သင်သည်သင်၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘဝ၌တစ်ဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ပိုပြီးအဖြစ်သင့်အတှကျအိပျညခံယူရင်တောင်သင်ကထိရောက်စွာလုပ်ကိုင်ဖို့လည်းပင်ပန်းဖြစ်ကြပါလျှင်၎င်းတို့သည်အချည်းနှီးဖြစ်ကြောင်းကိုသတိရပါ။ ကြွင်းသောအရာဖို့အချိန်ဒါကြောင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်ကိုပေးပါ။
ဒါ့အပြင်သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲကနေသင့်အိမ်ခွဲခြားဖို့သင်ယူပါ။ အကြောင်းပြချက်ကသင်ယနေ့ပြီးမြောက်နိုင်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်သောအရာကိုဆက်လက်မနက်ဖြန်အချိန်အများကြီးရှိသည်ဆိုသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်ညစာစားပြီးနောက်သို့မဟုတ်အိပ်ရာဝင်ချိန်မတိုင်မီအလုပ်လုပ်ဆက်လက်ရပ်တန့်။ ဒါဟာတကယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအခါနောက်တစ်နေ့နံနက်သင့်ရဲ့ဆရာလုပ်မယ့်အိမ်စာတာဝန်ကျရာရောက်စေဖို့သင်တို့ကဲ့သို့ပါပဲ။
ဖတ်ရန် သာ. ကောင်း၏သင့်ရည်မှန်းချက်များရောက်ရန်အဆင့် မှစ. ကိုယ်တော်၏အောင်မြင်မှုအရှိန်အဟုန်မြှင်။
အမှု၌သင်တို့ကိုတကယ်သွားရန်ရှိသည်သင်၏ desktop မှနာရီဝက်ထက်ပိုနေရန်ပိုနှစ်သက်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သင့်ရဲ့ mail ကိုဖတ်ပါသို့မဟုတ်သင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှတ်စုစာအုပ်ပိတ်ခြင်းအားဖြင့်သင်၏အလုပ်စစျဆေးဖို့စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံမရကြဘူး။ သင်သည်သင်၏ရုံးခန်း၌သင်တို့၏ဖိုင်တွေနဲ့သင့်ကွန်ပျူတာကိုစွန့်ခွာနိုင်ပါတယ်။ Tabler အစားသင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်အဖွဲ့အစည်းကိုတိုးမြှင့်အပေါ်။
အလုပ်၏အပြင်ဘက်တွင်လှုပ်ရှားမှုများ Program ကို
တစ်ဦးယောဂ session တစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးအားကစားရုံထဲမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုတွေထဲကနာရီ, decompress ရန်သင့်အား enable သမျှသောနည်းလမ်းများကောင်းပါတယ်။ ဤသည်ကသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖှံ့ဖွိုးတိုးကူညီပေးသည်အထူးသဖြင့်လျှင်ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးသင့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝနှစျသိမျ့တိုးတက်စေရန်ဖြစ်ပါသည်, အဟောင်းနှင့်အသစ်, မိတ်ဆွေများနှင့်အတူထိုကဲ့သို့ညနေခင်းဖြုန်းနေကြတယ်။ သူ့မိသားစုနှင့်အတူရုပ်မြင်သံကြားကိုကြည့်ညနေပိုင်းတွင်ဖြုန်းကိုလည်းဖြေလျှော့ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင်ခက်ခဲအာရုံစိုက်နေဖို့အမြဲခွင့်ပြုလပ်ချိန်မပါဘဲတနေ့လုံးထိပ်တန်း form မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားသင်တို့သည်ဧကန်အမှန်အနားယူပြီးအသီးဝါးဖို့အချိန်ယူ, ရေကိုမသောက်သို့မဟုတ်အပြင်ဘက်သို့သွားခွင့်ပြုပါ။ အဆိုပါရည်မှန်းချက်အဆုံးသတ်ဘယ်တော့မှမယ့်သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာအခိုက်, သင့်ကို client သို့မဟုတ်ညှိနှိုင်းဖွင့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့အလုပ်ဟာ Pareto နိယာမအရသိရသည် Organize
ဆိုလိုသည်မှာသင်၏လုပ်ဆောင်ပုံပေါ် မူတည်၍ သင်လုပ်သည့်အလုပ်များ၏ ၂၀% သည်သင်လိုချင်သောရလဒ်၏ ၈၀% ကိုပေးနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည်မြင့်မားသောထပ်တိုးတန်ဖိုးများရှိသောကြောင့်ဤတာဝန်များကိုမဟာဗျူဟာအရအရည်အချင်းပြည့်မှီသည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်နံနက်ခင်းလူဖြစ်ပါကနေ့ ၂၀ အစတွင်ဤ ၂၀% ကိုပြီးမြောက်စေပြီးနေ့လည်စာစားပြီးနောက်ကျန် ၈၀% ကိုပြန်ထားပါ။
ဒါ့အပြင်ညျြးနှီးလုပ်ငန်းတာဝန်များတွင်အချိန်ဖြုန်းရှောင်ကြဉ်ပါ။ အစည်းအဝေးများအရေးကြီးဆုံးအကြောင်းအရာများနှင့်အတွေးအခေါ်များဖို့အချိန်စကားပြောကန့်သတ်ရန်ရန်သင့်အားကူညီပေးပါမည်ရပ်နေ Organize ။ ကုမ္ပဏီအပေါငျးတို့သအစည်းအဝေးများတက်ရောက်ရန်ရှောင်ရှားရန်အပတ်စဉ်အစီရင်ခံစာများသို့မဟုတ်ပြည်တွင်းရေးဆက်သွယ်ရေး၏အခြားနည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုပါ။ ထိထိရောက်ရောက်သင်သည်သင်၏အလုပ်အတွက်လိုအပ်သမျှအချက်အလက်တွေကိုပြန်လည်နာလန်ထူဖို့ခြေလှမ်းတွေကိုယူပါ။
ဤအကြံပြုချက်များထိရောက်မှုတစ်သက်သေဖြစ်သော, သင်တစ်နေ့တာအစောပိုင်းတာဝန်များကိုပြီးအောင်ကူညီခြင်းနှင့်ရှေ့ဆက်ရပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှတ်တမ်းများလက်ရှိဖြစ်သည့်အခါကျနော်တို့နေဆဲစိတ်ထဲပိုပြီးငြိမ်းချမ်းရေးရှိသည်။
သငျသညျလညျး, အဘယ်ကြောင့်သိသိသာသာသူ့အလုပ်နှင့်သူပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘဝအကြားပိုကောင်းတဲ့ချိန်ခွင်လျှာဖော်ပြပေးသောချစ်ရသူတစ်ဦးမှဘာသာရပ်နှင့် ပတ်သက်. အကြံဉာဏ်တောင်းပါကငြင်းပယ်နိုင်ပါ။ ဤသည်သင်၏အသက်တာ၏ဘာမျှမသိတယ်နှင့်သူ၏န်ဆောင်မှုအပြည့်အဝစျေးနှုန်းမှာတရားစွဲဆိုထားသူတစ်ဦးလူစိမ်းတို့ကအကြံပြုခံရဖို့ထက် သာ. ကောင်း၏။
ထို့အပြင်နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုချိုးဖျက်ဖို့အချိန်ကိုယ့်ကိုယ်ကို Give နှင့်အချို့သောယူ ချွတ်ရက်ပေါင်း။ သငျသညျကြိုက်သလောက်ယဉ်ကျေးမှုသို့မဟုတ်ထူးခြားဆန်းပြားခရီးစဉ်စုစည်းဖို့အခွင့်အလမ်းကိုယူပါ။ အနီးနှင့်ဝေးမိတ်ဆွေများသင့်မိသားစုသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်ဤအခွင့်အလမ်းအားသာချက်ကိုယူပါ။ တနည်းအားဖြင့်ဒီပုံမှန်ထက်စီမံကိန်းများပြီးစီးရန်စုံလင်သောအချိန်ဖြစ်ပါသည်, သငျသညျနားလည်သဘောပေါက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
အကယ်၍ ချက်ချင်းထွက်ခွာရန်မဖြစ်နိုင်ပါကသင်၏တနင်္ဂနွေကိုတစ်ရက်ခြင်းဖြင့်တိုးချဲ့ခြင်းသည်တစ်ပါတ်အားလပ်ရက်ကဲ့သို့အကျိုးရှိကြောင်းသိထားပါ ထို့အပြင်ပျော်စရာလှုပ်ရှားမှုများကိုဤ ၃ ရက်အတွင်းအပန်းဖြေအနားယူနိုင်ပါသည်။
ဖတ်ရန် မြန်ပြီးတော့အကျပ်အတည်းကိုဒူပင်ပန်းပြင်းထန်တဲ့ မှစ. သာ. ကောင်း၏သင်ဟာ-ကိုသတိရပါ-Exit ကိုလေ့လာပါ
သင့်ရဲ့ကျောင်းသားသို့မဟုတ်သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တဦးဟာ formants ၎င်းတို့၏ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အသိပညာတိုးပွားစေဖို့အခွင့်အလမ်း Give သူတို့ကိုအချို့သောအထောက်အပံ့ကိုပေးပြီးတာဝန်များကိုလွှဲအပ်။ cons အသုံးပြုပုံတာဝန်များကို၌သင်တို့ကိုကူညီပေးဖို့မန်နေဂျာတစ်စုံတစ်ဦးကလိုအပ်သောအလုပ်၏အကောင်အထည်ဖော်မှု၏ကောင်းတစ်ဦးစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုပါဝငျသညျ။ တစ်ဦးကဆိုးဆိုးရွားရွားမလွှဲမရှောင်အကျိုးဆက်များရှိသည်လိမ့်မယ်သင်ခြင်းဖြင့်လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့ကြလို့ယူဆတယ်သူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးခြင်းဖြင့်ပြုသောအမှု။
အချို့ရက်ပေါင်းအိမ်ပြန်မှသင်၏အလုပ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလုပ်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းဖို့ကိုသင်ကိုက်ညီမယ်ဆိုရင်ဒါဟာဖြစ်နိုင်ဖြစ်စေခြင်းငှါ, မအားနည်းချက်များရှုမြင်သင့်ရဲ့အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ သငျသညျအိမျမှာကပိုအချိန်ဖြုန်းချင်လျှင်ဒီအလုပ်လုပ်နည်းလမ်းအကျိုးရှိသည်။ ကုမ္ပဏီ၏စစ်ဆင်ရေးသင့်ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမရှိခြင်းအားဖြင့်ကန့်သတ်ထားသည်မဟုတ်အဘို့မူကား, သငျသညျအရာခပ်သိမ်းကောင်းစွာတတ်ကြောင်းသေချာစေရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအားလုံးသည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘဝအကြား ပြီးပြည့်စုံသော ချိန်ခွင်လျှာကို ရှာဖွေနေကြသည်။ သင့်အလုပ်နှင့် မိသားစုဘဝကို စီမံခန့်ခွဲရန် ဖြစ်နိုင်သော်လည်း အချို့သောအချိန်များတွင် ရွေးချယ်မှုများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝကို အနည်းငယ်ပို၍ဂရုစိုက်ရန်၊ ဥပမာအားဖြင့် အလုပ်လျှော့ခြင်းဖြင့် မိသားစုကို ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါမှမဟုတ် သင့်ကိုယ်ပိုင်ဘဝကို နည်းနည်းလေး စွန့်လွှတ်ခြင်းအားဖြင့် သင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက် အချိန်ပိုပေးပါလိမ့်မယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ ဤရွေးချယ်မှုများသည် သင့်အား စီမံ၍မရသော အခြေအနေဖြင့် ညွှန်ပြနေခြင်းထက် ရောင်ပြန်ဟပ်မှု၏ ရလဒ်ဖြစ်သည်မှာ ပိုကောင်းပါသည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘဝအကြားချိန်ခွင်လျှာရှာဖွေခြင်း နိုဝင်ဘာလ 25th, 2018Tranquillus
အောက်ပါတစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ် setting ကိုအတွက်စည်းရုံးသိမ်းသွင်းဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Signal တွင်လှုပ်ရှားမှုအဖြစ်သူ့ကြောက်လန့်-ကွောကျရှံ့ခွငျး၏ Pass